गगन थापाको प्रश्न सूचना प्रविधि विधेयक नपढीकन आयो कहाँ छलफल गर्ने मन्त्री ज्यू ? | TV Todayगगन थापाको प्रश्न सूचना प्रविधि विधेयक नपढीकन आयो कहाँ छलफल गर्ने मन्त्री ज्यू ? – TV Today
गगन थापाको प्रश्न सूचना प्रविधि विधेयक नपढीकन आयो कहाँ छलफल गर्ने मन्त्री ज्यू ?
Posted on: २४ पुष २०७६, बिहीबार
काठमाडौँ, पुस २४ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले काम गरेर जनताकोे मन जित्न नसकेपछि आलोचनाबाट जोगिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने विधेयकहरु विरुद्ध बिहिबार काठमाण्डौको माईतीघर मण्डलमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कमजोर सरकारले कानून बनाएरै जनताको मुख थुन्ने प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विधेयक नपढीकनै विरोध गरिएको भन्ने विभागिय मन्त्रीको भनाई प्रति पनि आपत्ती जनाउनुभयो । विधेयकका सबै दफा दफामा आफु छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले छलफल कहाँ गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विधेयकका दफा दफामा छलफल गर्न विभागिय मन्त्रीलाई चुनौति नै दिनुभयो । उहाँले सुचनाको हकको अधिकार कुण्ठित गर्ने हो भने नेपालको संविधान क्युवा र उत्तर कोरियाको संविधान भन्दा भिन्न नरहने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
उहाले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्री बलियो भएर आएको होइन । प्रधानमन्त्री लुते भएर आएको । प्रधानमन्त्री कायर भएर आएको हो यो । अस्वस्थ्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । म स्वास्थ्य लाभको कमना गर्छु । ”विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेको वहानामा मस्यौदामा ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द मात्रै थप्ने काम भएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।